Ihe ngosi ụbọchị ole na ole mgbe ọ malitere, ndị Xiaomi Mi 8 Lite, makwaara dị ka Akwukwo ndi ntorobịa Mi 8, kpughere site n'aka onye isi na onye guzobere ụlọ ọrụ ahụ, Lei Jun.
Xiaomi atọrọ iji kpọsaa ngwaọrụ ọhụrụ a n'akụkụ igwe egwu na ihe omume na Chengdu n'ehihie. Nyaahụ, Xiaomi nyere ule nke ngwaọrụ a site na ibipụta ihe oyiyi. Ụlọ ọrụ ahụ ga-eweta mbipụta Mi 8 nke ndị ntorobịa n'akụkụ mbipụta mkpịsị aka Mi 8, elekere elekere mara mma na mgbaaka NFC nwere oke.
Na onyonyo nke Lei Jun bipụtara, anyị nwere ike ịhụ nsụgharị abụọ nke Mi 8 Youth na gradients nke na-eme ka ọ dị egwu. Ndabere azụ na-egosipụtakwa ihe igwefoto a na-ahụ anya nke na-eme ka ọ dị iche na iPhone X. Na mgbakwunye, a hụrụ na ese foto ahụ na Mi 8, ụdị 'okenye' nke ngwaọrụ a ga-eweta .
Akụkụ nke Xiaomi Mi 8 Ntorobịa
Nyochaa ọzọ, Xiaomi Mi 8 Ntorobịa ga-enwe ihu igwe 6.26 nke anụ ọhịa FHD + yana akụkụ 19: 9 ma kwadoro ya. Snapdragon 660 processor na ụdị dị iche iche na RAM na nchekwa.
A na-agbakwunye ihe mmetụta 24-megapixel n'ihu, ebe ihe mmetụta 12-megapixel nke ọ bụla na-agbakwunye n'azụ yana ihe mmetụta mkpịsị aka. Akwụkwọ mpịakọta Mi 8 ga-abịa na batrị 3,000 mAh na gam akporo 8.1 Oreo na ndabara.
N'ikpeazụ, ụgwọ nke Xiaomi Mi 8 Lite (Mi 8 Ntorobịa) ga-abụ $ 281 dollar, mgbe Fingerprint mbipụta enweghị enen price ma. Pụrụ ịhụ ihe nile banyere mobile nke miri emi na njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi CEO kwadoro ụdị abụọ nke Mi 8 Youth na grajentị